मेघा हेल्थ चेक अप क्याम्प : 131 जनाले गरे निःशुल्क आँखा जाँच - खबरम्यागजिन
Homeखबरडुवर्समेघा हेल्थ चेक अप क्याम्प : 131 जनाले गरे निःशुल्क आँखा जाँच
March 19, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि डुवर्स 0
सजन शर्मा /सुकेपोखरी 19 मार्च ।
सियोक चिया कमानमा मेघा हेल्थ चेक अप क्याम्प सम्पन्न भएको छ । गत 18 मार्च 2018 आइतवारको दिन कञ्चनजङ्घा फूटबल क्लव (केएफसी) , लायन्स आई हस्पिटल सिलगढ़ी, तराई लायन्स ब्लड बैंक, अकूप्रेसर ट्रीटमेन्ट सेन्टर सिलगड़ी तथा सियोक वर्कर्स डेवलोपमेन्ट कमिटीको संयुक्त तत्वावधानमा मेघा हेल्थ चेक अप क्याम्प सम्पन्न गरियो ।
131 जनाले निःशुल्क आँखा जाँच गराए, 13 जनाको मोती बिन्दु फेला परेकोले तिनीहरूलाई आगमी 23 तारिक मार्च सिलगड़ी लायन्स आई हस्पिटलमा निःशुल्क ओप्रेसनको निम्ति लगिने छ । सियोक चियाकमान प्रबन्धक ओपी लामाले गाड़ीको व्यवस्था गरिदिने भएका छन्। 21 जनालाई सुलभ मुल्यमा चस्मा उपलब्ध गराइएको केएफसी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले बताए ।
यसैबिच 37 जनाले रक्तदान गरे जस मध्ये9जना महिलाहरू सामेल छन् । 97 जना रोगीको जाँच अकूप्रेसर पद्धतिद्वारा गरियो । यो पद्धतिलाई सबैले मन पराए । शिविरमा मानिसको अनियन्त्रित भीड़ भएकोले आगमी 1 अप्रेलको दिन पुन: स्वस्थ्य शिविर राखिने तय गरिएको छ ।
आगामी शिविरमा जेनरल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, दाँतको डाक्टर, रक्त वर्गिकरण, सुगर टेस्ट आदि उपलब्ध रहने छ। आइतवार सम्पन्न शिविरमा हेल्थ स्टाफ सुनिता प्रधान, देवी गुरूङ तथा करिश्मा गुरूङले पूर्ण सहयोगका साथ मधुमेह एवं रक्तचाप जाँच गरे ।
शिविरमा सिलगड़ी लायन्स क्लब आई हस्पिटलका विशेषज्ञ डा. अनामिका कुमारी, डा. राहुल मोदक ,अकूप्रेसरका डाक्टर माणिक चौधरी, शिविर संयोजक एवं केएफसी सिलगढ़ीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधान, दिलीप प्रधान अनि बिकाश छेत्रीको विशेष उपस्थिति थियो। सियोक चिया कमानका प्रबन्धक ओ पी लामा साथै सह प्रबन्धक र कर्मचारीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।